Ikhaya » Izindaba Zamuva » Uhambo lokuzijabulisa » Izindawo eziphezulu eziwu-10 zokuhamba zabahambi bodwa kulo nyaka
Uhambo lokuzijabulisa • Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Culinary • Amasiko • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba ze-Iceland Breaking • Izindaba zeMalta Breaking • Izindaba • Abantu • IPortugal Izindaba Ezintsha • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Ukuhamba ngeSolo kuvula amathuba amaningi nenkululeko, okukuvumela ukuthi uzenzele i-ajenda yakho, wenze abangane abasha, futhi ukhule njengomuntu.
I-Iceland yizwe eliphephe ngokukhethekile, elinamazinga okuphepha angama-76.2 kanye nezinga lobugebengu elingu-23.8.
IMalta yaziwa ngobudlelwano bayo bomlando nama-dynasties amaningi kanye nezinqaba eziningi namathempeli abashiye ngemuva.
IPortugal yaziwa ngamathafa ayo amahle, amabhishi nezakhiwo, nokudla kwasolwandle okuhle, kepha futhi kuyizwe elinobungane neliphephile futhi.
Uma uwuhlobo lomuntu othanda ukuphonsa izikhwama zakhe ngaphakathi isitoreji semithwalo ngqo lapho ufika futhi uphuma lapho uyohlola idolobha elisha uwedwa, ngabe wake wacabanga ngokuziqalela i-solo adventure yakho?
Noma ngabe abangani bakho abakasibambanga isiphazamisi sokuhamba njengawe, uyakuzonda ukuthwalwa umthwalo ngokuhlela ukuzungeza abanye abantu, noma umane ufuna ukuphuma nobhaka ubone ukuthi uhambo lukuyisa kuphi, kunezizathu eziningi zokuthi kungani ukuhamba wedwa kungaba yinto enhle kakhulu.
Kepha noma ngabe uphumile esikoleni esiphakeme uqala unyaka we-gap noma ufuna ulwazi olusha kamuva empilweni, ukuzihambela ngokwakho kungaba yinto enhle kakhulu, ngakho-ke ochwepheshe bezokuvakasha bahlaziye izindawo eziningi emhlabeni wonke ukuze thola ukuthi yiziphi izindawo ezihamba phambili, eziphephe kakhulu, futhi ezingabizi kakhulu zokuhamba wedwa.
Imiphumela yalolu cwaningo ikhishwe namuhla iveze amazwe ahamba phambili emhlabeni ngokuhamba wedwa ngo-2021.
Ucwaningo lubheke izinto ezifana nezindleko zezithuthi zomphakathi, ubugebengu nokuphepha, izinga lokushisa, izindleko zokuhlala amahhotela, ikhwalithi yamahostela, imigoqo, izindawo zokudlela, izindawo ezikhangayo, imisebenzi yamaqembu nemvula.
Amazwe ayi-10 aphezulu wokuhamba wedwa:
Isibalo Izwe Isikolo Sokuhamba Solo / 10